Eyokuqala Ithebhulethi ye-Samsung Android Inikwe kwaye sele sizazi zonke iimfihlo zayo. Ngokubanzi sisixhobo esinenkangeleko ecocekileyo kwaye ngaphakathi kwayo akukhathalelwanga. Nalu ushicilelo olusemthethweni olusemthethweni kunye nazo zonke iimpawu.
I-IFA, iBerlin, ngoSeptemba 2, 2010- Isamsung Electronics Co, Ltd, inkokheli yehlabathi kubuchwephesha beselfowuni, namhlanje ibhengeze ukumiliselwa kwe-Samsung GALAXY Tab (Imodeli: GT-P1000). Exhotyiswe yinkqubo yokusebenza kwe-Android 2.2 (FroYo), i-GALAXY Tab sisixhobo sokuqala sethebhulethi yenkampani kwaye imele udidi olutsha lweemveliso zeSamsung.
I-Samsung GALAXY Tab idibanisa iindlela eziphambili zeSamsung ukulungiselela ukusetyenziswa kwezixhobo eziphathwayo: ukukhangela kwi-Intanethi, ukudlala umxholo wemultimedia, unxibelelwano olusisigxina nge-imeyile, ilizwi kunye nevidiyo, i-SMS / i-MMS okanye uthungelwano lwasentlalweni, ngenxa yomsebenzisi ophuculweyo wesixhobo kunye no-7 ”kwesikrini sayo.
"Isamsung izinikele ekukhuleni okukhulu kule marike isandula ukwenziwa kwaye siyakholelwa ukuba i-GALAXY Tab imele isindululo esikhethekileyo esikwaziyo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezintsha nezisakhulayo eziza kuqhubeka nokukhula kwaye ziphuhle njengoko abathengi besebenzisa amandla aso angenamda. , " utshilo uJK Shin, uMongameli kunye noMlawuli weNdawo yoNxibelelwano ngeSelfowuni kwi-Samsung Electronics. "I-Samsung GALAXY Tab yenzelwe ukwandisa amava akwi-Intanethi kwaye imele ukuvela kwale ntengiso intsha, iyinkampani elinye inyathelo njengoovulindlela kwizixhobo ze-smart."
Ingqondo entsha yokuhamba kwemultimedia
Njengoluhlu lwemveliso entsha, i-7 ”TFT-LCD yesikrini seGALAXY Tab efanelekileyo ukujonga imovie, iifoto, iincwadi ze-e okanye iincwadi zokwabelana. Ngokwendlela yoyilo, ukukhanya kwayo (i-380g) kunye nobukhulu bayo kuyenza ukuba ibe sisixhobo ekulula ukusiphatha. Ukongeza, ukuhambelana kwayo neAdobe Flash Player 10.1 kunye ne-HTML 5.0 ikuvumela ukuba ujonge umxholo we-Intanethi ngokugqibeleleyo nangokukhawuleza.
Ine 'Readers Hub' -isicelo esikhethekileyo seSamsung seencwadi ze-e-ezinikezela ukufikelela ngokulula kwilayibrari yedijithali ebanzi- ukusuka kuncwadi lwakudala ukuya kweyona ncwadi ithengiswa ngoku kunye nezinto zokubhekisa. Kwangelo xesha, i-Samsung ityhila 'iMedia Hub,' isango lokuya kwihlabathi leemovie kunye neevidiyo, kunye ne 'Music Hub,' isicelo esibonelela ngokufikelela kuluhlu olubanzi lweefayile zomculo.
I-Samsung GALAXY Tab inenqanaba lobuchwephesha obuguqulweyo obuyimfuneko yokuhambisa ukuhamba kunye nePC kudidi olutsha ngokupheleleyo, ukubonelela ngamathuba okutya, ukudala nokunxibelelana ngendlela ebingenakwenzeka kude kube ngoku.
Inamandla kwaye ihlala ikunxibelelwano
Enkosi kunxibelelwano lwayo lwe-3G HSUPA, iWi-Fi 802.11n kunye neBluetooth 3.0, iSamsung GALAXY Tab iphucula unxibelelwano ngeselula ebesaziwa kude kube namhlanje. Ukongeza, i-videoconferencing kunye ne-imeyile kwiscreen esikhulu se-7 ”siququzelela unxibelelwano olusebenzayo nolusebenzayo. Ngomnxeba welizwi, i-Samsung GALAXY Tab isebenza njengomhlaba ogqibeleleyo okanye umnxeba ophathwayo kwifowuni ye-Bluetooth®.
I-Samsung GALAXY Tab ixhotywe ngeprosesa yesicelo se-8GHz Cortex A1.0. Kwangelo xesha, isikrini esigcweleyo se-HD ngenkxaso yeecodec ezininzi (iDivX, XviD, MPEG4,
H.263, H.264, njl.njl.) Yonyusa ukonwatyiswa kokonwaba kwemultimedia.
Ikhamera engaphambili ikuvumela ukuba usebenzise ividiyo ngefowuni ngetekhnoloji ye3G, kwaye ikhamera ngasemva ikuvumela ukuba uthathe iifoto kunye neevidiyo ukuze uhlele, ulayishe okanye wabelane ngazo kamva, zonke zinesixhobo esinye. Njengokuba ubuchule bokuyila kunye nomxholo okwi-Intanethi bukhula, i-GALAXY Tab iya kuba sisisombululo esifanelekileyo esiphathwayo seendlela zokuphila ezifuna unxibelelwano olusisigxina.
I-Samsung GALAXY Tab iya kufumaneka eSpain ukusuka ngo-Okthobha.
2) Izicelo zeGALAXY Tab
I-Samsung GALAXY Tab ineentlobo ngeentlobo zeenkonzo zokuncedisa kunye nokuphucula ubomi bemihla ngemihla babo bayisebenzisayo, apho ukufikelela kwiNdawo yeNtengiso ye-Android kudlala indima ekhethekileyo apho unokukhuphela usetyenziso kunye nokwenza isixhobo ngendlela engenamda . Ikwanokufaka ngaphambili izicelo ezenzelwe ngokukodwa ii-smartphones ze-Samsung kunye nezixhobo ze-smart.
Indawo yabafundi -Udibanisa izicelo zokufundwa ngekhompyutha, umzekelo, iincwadi ze-elektroniki, iimagazini kunye namaphephandaba edijithali, enikezela ngamava amanyeneyo kunye nobuchule ngeenkonzo zayo 'kwiThala leencwadi lam,' 'Ivenkile,' kunye 'nasekuFundeni.' Ngaphezulu kwezigidi ezi-2 zeencwadi ngeelwimi ezingama-25, ngaphezu kwamaphephandaba ayi-1.600 42 ngeelwimi ezingama-3.000 nangaphezulu kumaphephancwadi angama-20 XNUMX ngeelwimi ezingama-XNUMX aya kufumaneka ngomhla wokumiselwa.
Indawo yoLuntu -Igcina umsebenzisi eqhagamshelwe ngokusisigxina nabo bonke abafowunelwa. Isikhokelo esahlukileyo esidibeneyo seSamsung sidibanisa iinkcukacha zonxibelelwano kunye ne-imeyile, iiakhawunti ezivela kwiinkonzo zonxibelelwano zenethiwekhi, iinkonzo zemiyalezo kwangoko, kunye neenkcukacha zekhalenda kwiqonga elinye, ekulula ukulisebenzisa. Ke, unokujonga ngokulula ubume kwinethiwekhi yoluntu kwaye ukhethe ngokukhawuleza eyona jelo lolwazi lifanelekileyo- nokuba yi-imeyile, iSMS, umyalezo okhawulezileyo okanye umnxeba welizwi.
Ihabhu leMedia - Ngokukhawuleza nangokulula ukuhambisa ii-blockbusters zamva nje, ezakudala ezihlonitshwayo, kunye nemidlalo yeTV eyaziwayo. Imifanekiso ikumgangatho ophezulu kwiscreen sayo se-7 ”WSVGA TFT-LCD, ngelixa ikhathalogu yamawaka eshukumayo kunye noluhlu lweTV luqinisekisa ukuba umxholo unokufumaneka kuko konke ukuthanda. I-Media Hub iza kuphehlelelwa e-US ukuze kamva yande iye kwezinye iimarike zehlabathi.
Indawo yoMculo - Guqula i-Samsung GALAXY Tab ibe ngumdlali ophathwayo onikezela ukufikelela kwiingoma ezingaphezu kwezigidi ezili-10 ezivela kuzo zonke iintlobo zamagcisa kunye neentlobo zomculo. Ngolu khululo ngoku izinto ezinxulumene nomculo ezinje ngomdlali omanyeneyo, ukugcinwa, kunye nokusetyenziswa okunxulumene noko kuya kufumaneka kwisixhobo esinye, kunye nokubonelela ngolwazi malunga nokukhutshwa okutsha, uluhlu lweengoma kunye neengcebiso. Ngomdlali ophuculweyo womculo, unokwenza uluhlu lweengoma okanye ibhukumaka kwivenkile yomculo. umculo. Ukufumaneka kwe-Samsung Music Hub kuya kugqitywa ngokusekwe kukhetho lweentengiso ezahlukeneyo.
Iinkonzo Zeselula zikaGoogle Ukuhamba kwemephu zikaGoogle ™ (Beta) kunye noGoogle Goggles ziinkonzo ezinikezelwa liqonga likaGoogle likaGoogle, onokuthi ngalo wenze uphando ngobuchule endaweni yokuchwetheza idilesi ngqo. Ukongeza, umsebenzi onomdla wokukhangela ngelizwi ubonelelwa ukuphucula ukusebenza kwakho ekuhambeni. Kwelinye icala, inkonzo kaGoogle Goggles sisixhobo esinamandla sokukhangela esibonakalayo esisebenzisa ikhamera yeGlass Tab ukwazisa uluntu-ukwazi ukusebenzisa umfanekiso wendawo okanye umsebenzi wobugcisa ukwenza uphando kunye nokufumana umxholo ofanelekileyo. Ukongeza, ngekhamera unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nendawo okhoyo, enkosi ngokusetyenziswa kweenkonzo ezingathandabuzekiyo eziyinyani ezinokukhutshelwa kwintengiso yesicelo.
1) I-Samsung GALAXY Tab (GT-P1000) -Iinkcukacha zeMveliso
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-Samsung Galaxy Tab ibhengezwe ngokusemthethweni, zonke iinkcukacha
Enye into kukuba iyakwazi ukudlala iividiyo ezigcweleyo kwiscreen sayo, kodwa ayinayo i-HDMI ukuba ibe yi-FullHD.
Ngaba uyazi ukuba isikrini ekugqibeleni yi-AMOLED okanye i-SUPER AMOLED okanye i-SLCD? Enkosi!
Kwi-Dock yayo inemveliso ye-HDMI
I-Staticduo iqinisekile ukuba ine-HDMI? khange bathethe kwanto kwintetho yabo.
ukuba ine-HDMI kunye ne-DLNA, ndiyayifumana, kodwa ke ayenzi njalo! Ndizokucaphuka! XD
CHAVEZ POLO sitsho
Ngaba sikhona esinye isicelo ngaphandle kwelizwi le-ggogle lokufowuna ngelizwi?